Somali Youth Development Organization - Shiikha Stars
May 25 2019 21:14:28
Kubadda kolayga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah Cayaaraha loogu daawashada badan yahay looguna daawashada badnaa dalkeena hooyo ayadoo dhinaca kalena ah cayaarta kaliya ee xulka qaranka Soomaaliyeed ay ka soo hooyeen guulo ka badan kuwa noocyada kale ee Cayaaraha dalkeena.
Inkastoo dalka sidaasi looga qiimayn jiray cayaarta kubadda kolayga guud ahaan waxaa hadana ay dadku si gaar ahaan ah u taageeri jireen cayaartoydii kubadda kolayga kuwoodii ugu xirfadda iyo farsamada wanaagsanaa kuwaasoo mid ka mid ah amaba aan oran karno waxa uu ahaa cayaaryahankii ugu taageerayaasha badnaa amaba ugu mucjisada badnaa taariikhda kubadda kolayga dalkeena aan ku waraysan doono qormadayadan “One 2 One”.
C/Qaadir Xaaji Daahir “Shiikha” waxa uu ku dhashay magaalada Mogadishu sanadku markuu ahaa 1963 kii waxa uuna waxbarashadiisa ilaa iyo dugsiga sare uu ku so dhamaystay isla magaaladaasi Mogadishu asagoo ka deganaa degmada C/Casiis ama Kaambo taasoo ay ku noolaayeen tiro aad u badan oo ka mid ah taageerayaashii kubadda kolayga,iyada oo waliba ay ka soo baxeen degmadaasi ciyaaryahanno magac iyo maamuus ku lahaa noocyada kala duwan ee ciyaaraha, kana gaaray ilaa heer qaran kuwaasoo aan ka xusi karno: Muxidiin Cambar Khamiis,Yuusuf Shaqaaq, Cabdishakuur, Cabdulqaadir Dhamme, Axmed Tuke,Maxamuud Ciise, Maxamuud Jaamac”MJ”, Cali Xaaji Aweys, C/qaadir Sheikh Cabdi(Kookoow), Mulki Nuur Muudeey , Tariig Iigooy, Maryan Gardheere, Muuse Dude,Cabdi Maxamed Muuse,Asad Xaashi, Maxamed Aweys Awbaare iyo qaar kaloo badan.
C/Qaadir Xaaji Daahir (Shiikha) waa nin xishood badan aadna u afgaaban aadna ka dareemaysid deganaan iyo ka fiirsasho badan gaar ahaan inta uusan hadalada dhihin waxaana sidoo kale laga dareemayaa qof miisaankiisa aqooneed ee dhinaca horumarinta dhalinyarada iyo Cayaaraha uu aad u sareeyo.
C/Qaadir waxa uu dalkii hooyo ka soo tagay 1990 kii wuxuuna hadda ku noolyahay Gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka halkaas oo uu tababar kubada kolayga ah ku siiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u da’yar kuwaasi oo uu ka caawiyo xirfadda barashada aasaaska kubadda koleyga. (Fundamentals Basic of Basketball).
"Sawirka:(kooxdii Badda) Shiikha istaaga dh-bidix qofka labaad"
Taariikhdiisii cayaareed oo kooban:
Tartankii Degmooyinka gobolka Banaadir: 1978 iyo 1979kii.
Kooxda Badda : 1979- 1990
Xulka Qaranka : 1983 – 1990
Guulaha ay gaareen kooxdiisa Badda:
1979, 1982, 1985, 1989 kii Kaalinta koowaad Koobka Jeneral Daa’ud Kooxda kubadda koleyga ee “Badda”.
1980 iyo 1982 kaalinta koowaad ee horyaalka kubadda kolayga
Guulihii shakhsiga ahaa:
1986 iyo 1988 kii cayaarayahankii ugu wanaagsanaa tartankii ciyaaraha xidigaha kubadda kolayga, isaga oo ku guulaystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ka cayaara baalka (Forward),waxaa kale oo uu ku guulaystay gabi ahaanba tartanka tuurashada dheer ee saddexda dhibcood. (3 points).
Dalalka uu cayaaraha u tagay waxaa ay kala ahaayeen: Kenya 5 jeer, Ethiopia, Urdun, Kuwait, iyo Marooko.
Kooxihii Caalamiga ahaa ee uu la ciyaaray waxaa ay kala ahaayeen:
Jordan, Yamenta Cadmeed, Yamanta Sanca, Tanzania, Ethiopia, Zimbaabwe, Aljeeriya, Falastiin, Masar, Kuwait, U.A.E, Suuriya,Kenya, Marooko, Baxrayn, Ivory Coast,Mozambique, Nayjeeriya, Sacuudi Arabia,Lubnaan, iyo Muritaniya.
Sidoo kale waxaa kale oo uu cayaaryahanka ka qayb-galay ciyaaro saaxiibtimo iyo kuwo heer qaran ah “friendly match’ oo kooxdiisa Badda iyo xulka qarankuba ay la ciyaareen kooxo ka socday Africa iyo Maraykanka.
Waxaa iyaduna xusid mudan in cayaaryahanku uu kala qayb-galay kooxaha Jeenyo iyo Muqdisho cayaaro caalami oo ay ka qayb-galeen isagoo ciyaaryahan Shiikha uu dhinaca kalena ka mid ahaa tababarayaashii kooxda naadiga badda heerka 1aad ee gabdhaha iyo wiilasha iyo waliba tababareyaashii degmada Cabdicasiis, waxaana uu soo saaray ciyaaryahanno magac iyo maamuus ku yeeshay kubadda koleyga Soomaaliyeed.
Sawirka sare: Shiikha iyo qoyskisa "USA"
Haddaba, Shabakadda Cayaaraha.com ayaa kula kulantay magaalada London C/Qaadir Xaaji Daahir, waxayna u gudbisay su’aalihii ay akhristayaasha shabakaddani soo waydiiyeen xiddigan C/Qaadir Xaaji Daahir “Shiikha”.
Cayaaraha: Marka ugu horeysa waxaan kaaga mahadcelinaynaa waraysigan qaaliga ah ee aad naga ogolaatay in aan kuu soo gudbino.
Shiikha: Mahadsanidiin adiga iyo inta su’aalaha I soo weydiisay.. Aad ayaana kaaga mahadcelinayaa hawshan baaxdda leh ee aad haysaan iyo taariikhda ma guuraanka ah aad ka reebaysaan cayaartoydii hore ee dalka Soomaaliya.
Cayaaraha: Ka hor su’aalaha akhristayaasha waxaan kuu soo gudbinaynaa salaan uu kuu soo diray nin aad saaxiibo tihiin kuuguna dambaysay magaalada Mombasa 1995 kii sida uu u dhigay emailkii uu noo soo diray ninkaas oo magaciisa ku soo gaabiyey Guhaad waana ka xunahay su’aal kuma soo waydiin.
Sakariya Aaden Xaayow, USA: waxaan rabaa in aan su'aalo shiikha bal in uu noo xuso cayaartii ka dhacday garoonkii istaadiyo moqdishu oo aheed xulka qaranka masar iyo xulka somaliya maxaa dhacay daqiiqadii ugu danbeesay? yaasa kubadda gacantiisa ku jirtay xiligaas?
Shiikha: Zakariya Xaayoow, marna waa saaxiibkey, marna waa nin isboorti, waana ninka noo qaabilsan xagga Mediaha waxaana uu u shaqeeyaa “Somali Media” oo ka mid ah kuwa magaalada Minneapolis ee carriga Maraykanka loogu jecel yahay daawashadooda. Haddaan u soo noqdo Suaa’shaada, xaqiiqdii ma aha wax laga sheekayn karo iyadoo ay taagan tahay daqiiqaddii ugu dambaysay ee cayaarta oo kooxda reer Masar ay hal dhibac naga horreeyaan ayaa baas cajiib ah la ii soo gudbiyay, darbigii Masar oo aad u adkaa ayaan garaacis (dribble) la dhex maray oo tiigsaday goolka hase yeeshee banaanka ayaa layga soo dhigay(Block), mar labaad ayay kubaddii gacanteena soo gashay oo ciyaaryahan Cabdulqaadir Dhamme uu baas wacan ii soo gudbiyay, garaacis ayaan la dhex maray darbigii adkaa ee Masar oo goolka aan la tiigsaday….Gacmo badan oo I dul saaran ayaan arkay oo inta aan si xirfadaysan uga leexday goolkii ku hubiyay, sidaasina ay kooxdeena qaranka kubadda koleyga guushii nagu raacday. Waxaana filayaa inay ahayd taariikhda kubadda koleyga ee Soomaaliya markii ugu horreysay ee qaranka kubadda koleyga Soomaaliya uu ka adkaado qaranka Masar.
C/Casiis Goodax, Finland: Ciyaaryahan waxaad aheyd laga tixgeliyo wadankeenii, qaas ahaan ciyaartii kubadda koleyga, waxaad weli xasuusataa garoonkii ku yaalay xaafadda Cabdicasiis ee aad har iyo habeen ku ciyaari jirtey ma kugu soo dhacdey inaad garoonkaas aad ku soo baxdey ee ex-lugino wax u qabato adiga iyo asxaabtaada kale ee iyagana sidoo kale magaca ku lahaa ciyaarta kubadda koleyga? Haddii ay jawaabtaada haa tahay, goormaad ku tala jirtaan?
Shiikha: Mahadsanid: Haa weeye jawaabtaydu, waxaana u arkaa inay tahay waajib arrintaasi. Waqtigan xaadirka ah waan ka qayb qaadanaa in kasta oo aan dhihi karo sidii la rabay ma aha oo waa gaabinaysaa.Laakiin aniga iyo asxaabtayda kubadda koleyga oo adigu xataa aad ka mid tahay waa waajib na saran inaan garoonkaasi la tacaalno oo aan ka shaqayno inaan horumarino agabyadiisa kala duwan ee uu u baahan yahay.
Sawirka sare: Shiikha iyo reer C/Casiis "London"
Cayaaraha: Xaafadda C/Casiis ee aad ku barbaartay waxaa aad looga xiisayn jiray kubadda cagta marka adiga maxaa kugu dhaliyey in aad kubadda kolayga u leexato?
Shiikha: Waa runtaa, aniguba yaraantaydii waxaan si aad ah u jeclaa ciyaarta kubadda cagta oo xataa waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii dugsiga dhexe ee bartamaha uga qayb-gali jirtay tartamada cayaarta kubadda cagta ee dugsiyada, hase yeeshee u weecashadii aan u weecday kubadda koleyga waxaa u sabab ahaa saaxiibadaydii aan isla soo kornay oo iyagu u badnaa kubadda koleyga ciyaariddeeda oo dhankaasi ay ii jiideen.
Cayaaraha: Yaa kugu soo gacan qabtay ama kugu dhiirrigaliyay ciyaarta kubadda koleyga?
Shiikha: Waxaa igu soo gacan qabtay saddex dhallinyaro ah oo dagganayd degmada Cabdulcasiis oo kal ahaa:Caydaruus Maxamed Xaaji”Abba yare” (Allaha u naxariisto), Maxamuud Maxamed Ciise “Bicir” iyo Muuse Maxamed Muuse”Muuse Quuqle” oo ahaa tababarihii degmada Cabdulcasiis...waxaa isaguna gacan weyn aan ka helay yaraantaydii oo xirfadaha aasaaska kubadda koleyga I baray Tababare Herbert Tobiyoos oo ahaa Maraykanka madoow oo isagu tababare ahaan u joogay dalka Soomaaliya, ugu dambayntiina waxaa gacan aad u ballaaran I siiyay oo aqoontaydii kubadda koleyga wax wayn ku saa’idiyay tababarayaashii naadiga Badda oo kala ahaa: Macallin Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi iyo Allaha u naxariistee macallin Maaxi Macallin Maxamuud.
Sawirka sare: Shiikha Midig koowaad fadhiga "Kooxdii xidigaha Somali Arts".
Fawzia Nuur Cali,Norway: Ciyaarihii ugu qiimaha badnaa ee laga cayaaro dalka Soomaaliya ma xusuusan kartaa?
Shiikha: Haa,Dabcan cayaaro faro badan oo qiimo badnaa ayaa jiray,waxaana ka xusi karaa ciyaarihii xiddigaha kubadda koleyga oo la soo xuli jiray cayaartooydii ugu fiicnayd kubadda koleyga Soomaaliya,waxaana dhici jiray cayaaro dadku ay aad u jeclaystaan oo ka duwanaa cayaarihii heerka 1aad ee naadiyada “seria A”, sidoo kale waxaa iyaduna xusid mudan ciyaarahii gobolada dalka oo iyaguna ahaa cayaarahii loogu jeclaa gabi ahaanba cayaaraha dalka marka loo eego xamaasadda gaar ahaaneed oo ay lahaayeen.
Maxamad Ali, Holland: Muddo 10 sano ka badan ayaad ku jirtay Cayaaraha aadna lagaaga jeclaa maxaa kugu dhiirigelinayey in aad sii wado ma jacayl aad u qabtay cayaarta iyo guulaha mise lacag iyo mushaar?
Shiikha: waxaa aad iigu dhiirrigalinayay waxay ahayd jacayl (Hoppies) xad dhaaf ah oo aan u qabay cayaartaasi kubadda koleyga, mana jirin xaqiiqdii mushahar sidaa u buuran iyo lacag gaar ah toona oo dhallinyarada isboortiga ay qaadan jireen oo waxa ay qaadan jireen aan ku tilmaami karo Xaqal-saabuun, marka loo fiiriyana daqliga ay soo galin jireen iyo gunnada yar ay qaataan waxaa ay kala ahayeen kaaf & kala dheeri.
Calibaashi Cusmaan, Toronto, Canada: Tuurashada dheer ama 3 points ka aad ayaad ugu fiicnayd sidaan maqlayna garoonka Luujino ayaad tababar dheeri ah ku samayn jirtay ma saxbaa arintaas?
Shiikha: Sax weeye arrinkaasi, ogowse Cali baashi tuurashada laftigeeda inay ku timaado tababarka iyo dadaalka dheeriga ah uu cayaartooygu sameeyo, mana ahayn oo kaliya garoonka Luujino ee goobo badan ayaan filayaa inay tuurashadu ka socotay.
Sawirka sare: Shiikha "Dhexda" iyo orodyahan reer Suudaan ah "Bidix" iyo orodyahan Soomaali ah una orda USA. "Sweden"
Cayaaraha: Waxaan maqlay in aad mar ka tagtay kooxda Badda aadayna kooxda Horseed maxaa keenay ma khilaaf adiga iyo kooxda idin soo dhexgalay dartiis ayuu ahaa?
Shiikha: Maya, wax khilaaf ah nama soo dhex galin Naadiga Badda ee waxaan ugu ciyaaray naadiga Horseed amaah ahaan… Arrinkaasi markaan kuu sii balbalaariyo 1990kii oo ahaa ciyaarihii ugu dambeeyay ee laga ciyaaro dalka Soomaaliya kooxda Badda kama aysan qaybgalin tartankaasi koobka Jeneraal daa’uud ee kubadda koleyga duruufo dhaqaale awgeed, sababtaasi ayaa dhalisay inaan u cayaaro naadiga Horseed.
Dalmar Maxamed, London: Waxaan maqalnay in aad u timaadeen in aad urur ku dhistaan magaaladan London muxuu uga duwanaan doonaa kuwii horey u burburay?
Shiikha: Ma garan karo Dalmar, ururada kale oo aad sheegayso oo horay u burburay, waxaana jeclaan lahaa inaad tilmaanto oo aad tiraahdo urur hebel & urur hebel. Marka aan u soo noqdo ururkan aan ku dhisnay London oo lagu magacaabo SSIFO (Somali Sports International Friendship Organization) waa urur ay ku midaysan yihiin dhammaanba ciyaartooydii Soomaaliyeed ee kubadda koleyga Wiilal & Gabdho oo qof gaar u leh ma jirto. Siyaasadda ururkuna waxaa ay tahay wax u qabashada dhallaanka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan qurbaha iyo dalka gudahiisaba iyo in wada shaqayn dhex marto xiriirka Soomaaliyeed ee koleyga iyo dhallinta qurbaha oo haddii taasi ay hagaagto la oran karo mustaqbal wanaagsan ayaa u iftiimi doona kubadda koleyga Soomaaliyeed,waxaana soo bixi doona cayaartooy dalka gaarsiiya magac aad u sarreeya, iyo ciyaaryahanno Soomaaliyeed oo magac ku yeesha dunida.
Cayaaraha: Dadka Cayaaraha kubadda kolayga xiiseeya waxa ay kugu tilmaamaan cayaaryahankii ugu wanaagsanaa ee soo mara dalka adiga Shiikha ahaan kumuu ahaa cayaaryahankii ugu fiicnaa ee aad daawato kubadda kolayga dalka sidoo kale gabadhii ugu fiicnayd dhanka gabdhaha?
Shiikha: Runtii cayaaryahanno aan aad u jeclaa qaab ciyaareedkooda ayaa jiray dhanka wiilasha oo aan oran karo aragtidayda qaarkood xirfad ahaan waan isla sinnayn ama waaba iga sarreeyeen. Marka aad bay u badnaayeen waxaana ka xusi karaa: Maxamed Aadan Xirsi (Madoobe), Nuuraddiin Cali Saciid, Abuukar Axmed Maxamed (Abuukar Shiino), Cumar C/qaadir Maxamed (Baarajab), C/llahi Xaaji Cilmi Ereg (Xaaji),Cabdulqaadir Dhamme, Cabdulqaadir Garweyne, Faarax Oday,Yaasiin Maaxi,Cabdullahi Cilmi (C/llahi Wardhiigley), C/llahi Mandaliif,Cumar Anyeelo,Axmed Tuke, Cabdullahi Cali, Cabdijabaar M.Iimaan,Khadar Dacar Yuusuf, Axmed Bile, Axmed Daahir, C/llahi Dhooley,Garaad Ibraahim(Allaha u naxariisto) , Xuseen Cilmi Cali(Otto dheere),Isaaq Nuur Jiley, Bashiir Fox, Aadan Cabdi (Qardhaas), Axmed Muuse, Warsame Dheere, Cabdulqaadir Madaxey, Maxamuud Muuse (Shimad) ,Bile Warsame, Cabdalla dheere, Yuusuf Macallin Cilmi, Cabdi OK, Cumar Bile, Cabdi Xalwo, Cabdirisaaq Ugaas,Cabdicasiis Aayaroow, Cabdulqaadir Jaango iyo in kale oo badan oo aanan halkan ku soo wada koobi Karin. Dhanka gabdhaha waxaan aad u jeclaa qaab-ciyareedkooda oo aan ka xusi karaa: Mulki Nuur Muudey, Xaawo Shiikh Axmed ”Xaawo taako”, Qaali Xaaji Aadan, Beela Cabdi, Shuuto, Sucaad Cabdullahi, Geediyo Cali, Xaawo Yuusuf, Xabiibo Xaashi (Xabiibo Qaran), Khadra Cali Saciid, Safiyo Neero, Khadro, Shariifo Caddoow, Astur Jaamac, Xijaabo Cabdicasiis, Ambiyo Cali, Diib Cabdi, Miski, Caasho Camalooti,Sahro Xuseen, iyo Nadiifo Ibraahim Iidoow.
Sawirka sare: Xulkii Qaranka ee ugu horeeyey Shiikha "Koowaad Fadhiga Bidix"
C/Raxmaan Jimcaale, Jeddah, Saudi Arabia: Waqtiyadii kuugu fiicnaa Cayaaraha haddii aad awood u lahaan lahayd in aad koox kale aadid kooxdee aadi lahayd sababtuna maxay tahay?
Shiikha: Waad iga qoslisiisay saaxiib. Marka hore waxaan aad u jeclaa naadigaygii badda oo aan ku soo barbaaray iyo cayaartooydii aan waqtiga badan soo wada qaadanay oo ahaa dhallinyaro aqoontooda isboortiga iyo tooda maadiga ahba ay aad u heer-sarreysay. Ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ciyaartooygu uu fasax u ahaa inuu sameeyo oo kooxduu doono iska aado ama wax heshiis (Contract) ma jirin,waxaana ciyaartooygu ku xirnaa un in naadigu eryo oo loo arko midaan horumar samaynayn sidaana uu ku helo warqaddiisa fasaxa (Nullo Osto), dhaqdhaqaaq kale oo ciyaartooygu uu xor u ahaa ma jirin...Marka dhinac kale aan u rogo oo aan isku dayo inaan jawaabtaada qiil u raadiyo waxaan aadi lahaa naadiga Muqdisho oo aan ku lahaa saaxiibo badan iyo naadigaasi oo agabyadiisa ay u dhammaayeen xagga garoomada iyo isagoo naadigu u wanaagsanaa ciyaartooyda xag dhaqaale iyo wax u qabasho intaba.
Xamdi Maxamed Ali,Melbourne,Australia: Maadaama aad tahay ciyaaryahan magac dheer ku lahaa K/koleyga Somaaliya, khabiirna aad ku tahay cayaartaasi,Yaad sannadkan 2009 u saadaalinaysaa hanashada koobka NBA da?
Shiikha: Xaqiiqdii haatan lama saadaalin karo oo ciyaaruhu waa billow,laakiin kooxo ayaad moodaa inay dardar la soo baxeen oo haddii ay sidaasi ku socdaan aanan laga xigi doonin hanashada koobka sida: Lakers iyo kooxda haatan horyaalka haysata ee Boston. Waxaase iyaguna dab yar shidayn kooxaha: Phoenix, Houston, iyo Cleaveland, hase yeeshee Ciyaaruhu wali ma dhawa oo fari Kama qodna.
Cayaaraha: Waxaan la soconaa in kooxda idinka soo horjeeda ay kuu diyaarin jirtay cayaartoy ku raaca habeenkaasi marka kumuu ahaa kii kuugu adkaa ee aad ka hortimaado Cayaaraha dalka?
Shiikha: Dabcan koox kastaaba ku talo galkeeda ayuu noqonayaa in ciyaartooyga firfircoon ay u diyaariyaan ciyaartooy markaa difaaci kara, Aniga markaan cabiro Ciyaartooy ahaan waxaa iigu adkaa Saddex cayaartooy: Maxamed Aadan xirsi”Madoobe”, C/qaadir Garweyne, iyo Abuukar Shiino.
Maxamed Cali Xasan, London: Waxaan maqlay in ururka SSIFO, adiga iyo asxaabtaada kale aad ugu talogasheen inaad ku gorgortantaan si jagooyin sare aad uga heshaan xiriirka
Soomaaliyeed ee kubadda koleyga, Arrintaasi maxaad ka oranaysaa?
Shiikha: haddii aad maqashay iyo haddii uu tuhun kugu yahay iyo haddii kaleba waxba kama jiraan arrinkaasi, jago doon ma aan nihin oo hadafkeena iyo siyaasaddeena waa inaan caruurta Soomaliyeed taakuleyno sidan horay u sheegay.
Sawirka sare: Shiikha "Saddexaad fadhiga bidix" iyo kooxdii Jeenyo.
Cayaaraha: Maxay ahayd dhacdadii kuugu yaabka badnayd intii aad ku dhex jirtay Cayaaraha?
Shiikha: 2 dhacdo ayaa iigu yaab badnaa intaan ku dhex jiray cayaarta kubadda koleyga oo kala ahaa: guuldarradii kooxdeena qaranka aan kala kulanay kooxda qaranka ee Kenya iyo safarkii kooxda kubadda koleyga ee Jeenyo aan u raacay Mozambique oo aan gaarin goobtii ay cayaartu ka dhacaysay oo aan ku hakanay waddanka Zambia.1) Ciyaarihii is reebreebka qaranka K/koleyga ee lagu qabtay Muqdisho(Somalia), Kooxdeena qaranka waxaan legadnay Kooxda Masar oo iyagu ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan k/koleyga qaaradda Afrika, arrintaasi waxaa ay na galisay yididiilo iyo qab aad u wayn oo aan ku hantin karo kuna noqon karno horyaalka Afrika. Wareeggii 2aad oo lagu qabtay Nairobi(Kenya) waxaa cashar noo dhigay kooxda Kenya oo ka mid ahayd kooxaha ugu liita kubadda koleyga qaaradda Afrika. In kasta oo kooxda qaranka Kenya ay bilaabeen qash-qashaad,dagaal, indho faro ka galis, nalalka oo dhawr jeer la damiyo I.W.M , haddana guuldarradaasi nagu dhacday looma nisbayn karo arrimahaasi oo waxay ii ahayd guul darro iyo dhacdo yaab leh oo xusuustayda ciyaaraha raad weyn ku reebtay.2) 1986kii Kooxda Jeenyo (LL.PP) oo aan kala qayb-galay ciyaarihii horyaalada Afrika ayaan Muqdisho kaga adkaanay koox ka socotay Mozambique wareeggii hore. Wareeggii labaad oo aan u safarnay Maputo (Mozampique), waxaa dhacday in safarkeennii uu ku dhammaaday Zambia oo kooxdu intoodii badnayd ay gaari waysay Mozambique sabab xagga isku-xirka diyaaradaha (Bad Connection). Kala firirkii nagu dhacay wuxuu dhaliyay in 5 ciyaartooy ay tagaan Maputo, si qasab ahna lagu cayaarsiiyo, in kasta oo ay dadaaleen misana guuldarro dhabarka loo saariyo. In kasta oo aanan nasiib u yeelan inaan 5 taasi ciyaartooy ka mid noqdo misna ku haritaankii wuxuu igu noqday dhacdo yaab leh oo xusuustayda isboortiga raad weyn ku reebtay.
Cabdirashiid Axmed, London: Sida xogta nagu soo gaarayso maamulka SSIFO wuxuu durbaba bilaabay inuu jagooyinka isku qabsado, taasi sow ma soo dadajinayso in ururkiinu burburo?
Shiikha: Ma garan karo meesha warkan aad ka keentay iyo waxa aad ku jeclaatay in ururka SSIFO burburo, waxaan kuu caddeynaya in wax jago isku haysta aysan jirin oo adigaba haddaad hawl qabanayso soo dhawoow ayaan ku leenahay.
Sawirka sare: Shiikha iyo caruurta oo tababaro "USA"
Maxamed Sh. Xasan, London: Haddii ururkiina SSIFO uu ka leexdo ujeedooyinkii loo aasaasay, Adiga Shiikha ahaan ma is casilaysaa?
Shiikha: Haa, waan is casilayaa jawaabta oo kooban haddii ururka uu ka weecdo ujeedooyinkii loo abuuray.
Cabdi Maxamuud Yuusuf, Mogadisho: Gacmo dheere ayay dadka qaarkii kuugu yeeri jireen amaba kugu xaman jireen waayo waxaad ahayd ciyaartooy aad u gaaban misna wax la qaybsan jiray ragga dhaadheer, Maxaa kuu sahlay arrintaasi iyada ah?
Shiikha: Xarigga oo aan saaxiib la ahaa (Jump Rope) ayaan oran karaa wuxuu ii fududeeyay in bootintaydu ay fiicnaato. Marka aad baan ugu baraarujinayaa dhallinta yaryay ee soo koraysa inay isticmaalaan xarigga oo faaiidiooyin badan ay ka heli karaan.
Sawirka sare: Macalimiin Shiikha iyo Axmed-Daahir " Xidigaha Minesotto "USA".
Maxamed Xaaji C/llahi –Muqdisho: Intii aad ku dhex jirtay isbootiga kubadda koleyga,macallinkee iyo garsoorahee aad kuu cajab galiyay aqoontiisa iyo daacadnimadiisa oo aad la dhacsanayd?
Shiikha: Runtii aqoonta macallimiinta iyo garsoorayaasha Soomaaliyeed aad bay u heer sarreysay marka loo fiiriyo dalalka kale ee hodanka ah. Macallimiin faro badan oo aqoontooda k/koleyga ay sarreysay ayaa jira oo aan ka xusi karo: in badan waa ay heer sarreeyeen: macallimiinta: C/raxmaan Sheikh Mahdi, Idiris Ibraahim Suleymaan, Cismaan Cali Abanuur ”Buruno”, Cabdi maxamed Ciye”Cabdi Dheere”, C/llahi Axmed Tarabi, Ibraahim Jimcaale”Buruko”, C/Raxmaan Maxamuud Guhaad “Shiino” iyo C/ladhiif Afdhuub....Dhanka garsoorka waxaan garsooriddooda aad u jeclaa garsoorayaashii kala ahaa: Cabdi Calasoow Raage, Bashiir Jaamac”Bashiir goobe”, Xasan Garre, Cismaan Xalane”Cismaan Xarash”Baashaal, Domeniko, iyo Bashiir Nadiif.
Sawirka: Jaamac Karaaciin, Shiikha iyo Ibraahim Karaaciin "Leicester, UK"
Cayaaraha: Wax badan ayaan hubaa in aad kula kulantay safarkaagii yurub dad badana ku aragtay maxaad ka faaiidaysateen safarkan maxaase iska badalay fikirkaagii hore aad uga qabtay bulshada yurub?
Shiikha: waa runtaa,wax badan ayaan ka faa’iiday imaanshahaygii Yurub oo ay ugu horayso inaan is aragno,is marxabayno rag (Ciyaartooy) ahaa oo aan garoomada muddo isku jiidjiidaynay, Cayaartooy kala duwan iyo tababarayaal magac ku lahaa dalka Soomaaliya iyo Caalamka intaba,Mas’uuliyiin isboorti, ciyaartooy iyo tababarayaal “legends” hore oo magacyadooda aan maqli jiray,dad qaraabo ahaa oo dagaaladii sokeeye isugu kaaya dambaysay, rag aan isla soo kornay yaraanteennii oo waqti fiican aan isla soo qaadanay kuwaasoo giddigoodba iigu dambaysay 20 sano ka hor.kuwo aan isku iskool wada ahayn,kuwo aan xeryaha qaxootiga wada joognay maashaa-Allah ad bay u faro badnaayeen dadkii aan la kulmay waxaana ay ii ahayd farxad aad u weyn oo aan la soo koobi karin..... Xaqiiqdii fikirkayga Yurub markaan aad ugu kuur-galay wax wayn baa iska badalay ha noqoto dhanka arrimaha bulshada, Isboortiga, Nolosha dadka Soomaalida ah qoysaskooda iyo caruurtaba,xagga waxbarashada aasaasiga iyo dugsiyada quraanka intaba aad bay u heer sarreeyaan.
Cayaaraha: Hadda cayaaraha ma ka dhex baxday mise wali waad ku dhexjirtaa?
Shiikha: Maya kama dhex bixin oo wali waan ku dhex jiraa, waxaana isboortigu uu ka mid yahay nolol maalmeedkayga ....aniga qaybtii aan ciyaari jiray ayaan ka dhex baxay, waxaana haatan gacanta ku hayaa aniga iyo saaxiibadaydii qaarkood cayaaryahanno yaryar oo aad u tiro badan oo aan ka saacidno inaan horumarino farsamadooda kubadda koleyga. Dabcan waxaan rajaynaaa in caruurtaasi mustaqbalka ay ka soo bixi doonaan kuwo matala oo meel wanaagsan gaarsiiya magaca qaranka Soomaaliyeed.
Sawirka: Caruurta ay Shiikha iyo asxaabtiisu layliyaan.
Cayaaraha: Shiikha ma xasuusan kartaa cayaarahaagii kuugu wanaagsanaa ee aad cayaarto, iyo kuwii kuugu xumaa ee ku soo mara noloshaada intaad ciyaaraha ku dhex jirtay?
Shiikha: Cayaaro aad u wanaagsan oo aan ciyaaray ayaa maskaxdayda ka guuxaya ,waxaana ka mid ahaa: A) 1986 kii ,Ciyaartii kooxdeena qaranka ay ka adkaadeen kooxda Masar oo daqiiqaddii ugu dambaysay aan aniga gacantayda ku dhaliyay goolkii guusha,waxaana ay ii ahayd aniga & dadkii cayaaraha joogay ee daawanayay iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed guul iyo farxad aad u weyn. B) Guushii kooxdeena Badda aan kala hoyanay kooxda Jeenyo garoonka dedan ee Istaadiyo Muqdisho oo kooxda Jeenyo ay arbushaad ka dhigeen garoonka. C) 1989 kii isreebreebkii cayaaraha horyaalada Afrika oo kooxdii aan ka tirsanaa ee Muqdisho aan uga adkaanay kooxda Ethiopia. D) Habeenkii nalalka ay ka dameen garoonka Istaadiyo Muqdisho oo cayaarta loo soo wareejiyay garoonka Luujino oo si xarago badan aan uga adkaanay kooxda jeenyo. E) 1989 kii tartankii koobka J/Daa’uud oo aan ka adkaanay kooxihii Muqdisho & Somalita oo iyagu xilligaasi ugu awoodda badnaa... waxaana xusid mudan in habeenkii kooxda Muqdisho aan la cayaaraynay “semifinal” aan ka dhaliyay goolashii ugu badnaa (Score) hal cayaar oo ahaa 66 dhibcood. Iyada oo intaasi farxadood iyo kuwo ka badan ay I soo mareen ayaa haddana waxaa jiray habeeno aan garoonka kala dareeray guuldarro iyo tiiraanyo oo kuwii ugu xumaa aan ka xusi karo: A) 1983 Ciyaar ku tirsanayd koobka horyaalka oo kooxdeena Badda ay si xun nooga adkaadeen kooxda Madbacadda, ciyaartaasi oo aan hoggaanka ku haynay ilaa 9 dhibcood daqiiqaddii ugu dambaysay ayay noo awood sheegteen kooxda Madbacadda oo goolal faro badan ay naga dhaliyeen, halkaasina ay guushii nooga maroorsadeen. B) 1989 kii, ciyaarihii saaxiibtinimada waddamada Carabta oo lagu qabtay Kuwait oo kooxdeena qaranka ay naga adkaadeen kooxda Baxrayn oo iyagu aanan u qalmin guusha ay nagala dheelmadeen. C) 1987kii, wareeggii labaad ee cayaaraha All African games oo lagu qabtay Nairobi oo kooxda Kenya ay naga adkaadeen.
Cali Maxamed Abroone, UAE: Ciyaaryahannadee jeclayd inay garbahaaga buuxiyaan markaad u ciyaaraysay kooxdaada badda iyo xulka qarankba?
Shiikha: Cayaaryahanno faro badan ayaan jeclaa, dhanka Badda waxaan ka xusi karaa: Nuuraddiin Cali, Axmed Xamza, Yaasiin Maaxi, Cabdi Yare, Saacid Baariyoow, Baashi Dheere, Otto dheere,Warsame Dheere, Maxamuud Muuse “Shimad”, Cumar Bile, Muuse Axmed (Allaha u naxariisto), Kimaani (AHUN), Mahad Marayare (AHUN), Guuleed Aden Xirsi iyo Xuseen Xasan (AHUN). Dhanka qaranka waxaan ka xusi karaa cayaaryahannadii kala ahaa: Isaaq dheere, Warsame Dheere, Cabdulqaadir Madaxey, Cabdulqaadir Dhamme, Cabdalla Cali, Cabdi Xalwo, Abuukar Shiino, Madoobe, Baarajab, Cumar Anyeelo, iyo Yuusuf Macallin.
Sawirka sare: Xulkii qaranka Soomaaliya 1989
Cayaaraha: Maxaad kula talinaysaa xiriirka K/ kolayga Soomaaliyeed iyo waliba cayaartoyda iyo maamulada kooxaha dalka?
Shiikha: Marka hore waxaan Hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga ahna guddoomiye xigeenka guddiga olimbikada Soomaaliyeed mudane Aadan Xaaji Yabaroow ”Wiish” , xubnaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga, cayaartooyda iyo maamulda kala duwan ee naadiyada dalka ka dhisan gabi ahaantoodaba taasoo aan ugu hambalyaynayo hawsha baaxadda wayn ee isboortiga oo aad u haysaan ummadda Soomaaliyeed iyadoo aynu ka wada dharagsanahay dhibaatada iyo amni xumada ka jirta dalka soomaaliya, haddana aad u istaagteen horumarka isboortiga, calankii soomaaliyeedna maxfalada dunida ee isboortigu isugu yimaado uu ka dulbabanayo,taasi waan ugu hambalyaynayaa maamulada tallaabooyinkaasi sharafta badan ee muuqda oo ay horay u qaadeen.
Sidoo kale Waxaan iyaguna u hambalyaynayaa guddoomiyaha GOS mudane C/Qaadir Gacal "Abkow", gudoomiye xigeenka Olimbikada Soomaaliyeed ee xiriirka dibadda Mudane Duran Faarax, Xoghaynta Olimbikada macallin Cabdullahi Tarabi, iyo guddoomiyaha diyaasbaraha Maxamed Macallin dadaalka muuqda oo ay ka gaysteen horumarinta cayaaraha noocyadooda kala duwan.
Ugu dambayntii waxaan u hambalyeynayaa guddoomiye ku xigeenka Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga arrimaha dibadda Enj:Baana Cabdalla Cali oo ka mid ahaa dhallinyaradii aan ku soo barbaariyay kubadda koleyga, haatanna ka mid ah mas’uuliyiinta ugu sarreysa xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda koleyga iyo Macallinka qaranka Cumar Anyeelo oo isaguna aan ka wada tirsanayn xulkii qaranka, dardarkii ay galiyeen kubadda koleyga iyaga oo waqtigooda iyo hantidoodaba u huray inay horumar gaarsiiyaan Kubadda koleyga.
Dhinaca talada waxaan kula talin lahaa in marka hore aysan ka daalin hawshan aan inteenii kale ka gaabinay isla markaana ay nagu dhiirigeliyaan sidii aan ugala qaybqaadan lahayn hawshan baaxadda leh isla markaana waxtarka u leh dalkeena.
Waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa xiriirka in ay had iyo goor ka fogaadaan in ay qayb bahwaynta ka mid ah soo dhawaystaan qaybna iska fogeeyaan waxaa waxtarkeenu ku jiraa wadajirkeena sidaa darteed nagu taageera wadajirka anaguna waxaan idinku taageeri doonaa waxqabadkiina anagoo wadajirna.
Sawirka sare: Mohamud Ismail "Cayaaraha" iyo Shiikha "London".
Cayaaraha: Adigoo ka faaiidaysanaya fursadan yaad jeceshahay in aad halkan ka salaanto?
Shiikha: Aniga oo fursaddan ka faa’iidaysanaya &
Render time: 0.02 seconds 3,197,033 unique visits